UMSITHO esihogweni | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ukususela ngoSeptemba 23, 2017 NgoMeyi 21, 2018
Xa sijonga ukubaluleka nokungxamiseka okubhalwe kule ncwadi ndagqiba endaweni ukwenza ukuhlela, ukupapasha abakhululekileyo ngokupheleleyo kwi blog.
Ndiya wayisingatha ibonisa ukuba ubomi abantu kwiminyaka yakutshanje.
Thina sonke sibone ukuba ukungakhuseleki kuye izihlwele ngemihla ehlabathini lonke. Iimfazwe, ubundlobongela, iintlekele, izifo, indlala, ukungabi imilinganiselo, ibenza ubunzima ebekwe phezu okanye zonke izizwe ehlabathini.
nokubi iimeko Kungandawoni wabahlisela yonke le ntlekele? Ndiza bonisa oko okusebumnyameni yesazela ukuze wonke umntu uyaqonda ukuba kudaleka ukho kuzo zonke ezi ngxaki zokhuseleko.
Ukuba sele Qiniseka ukuba ubomi abantu Destop ngokukhawuleza kakhulu oko. Yinto eqinisekileyo yaye siza kubona kule ncwadi zithini izizathu kunye neziphumo kwaye zeziphi iindlela ezikhoyo eluntwini.
Yonke imihla oludlulayo, isithembiso kumajelo kwihlabathi amaphupha kunye nehlabathi elingcono iminyaka ezayo. Kodwa sifumanisa ukuba ubomi kusenza sibe ibenza neyokudinga ngemihla.
Ndiyanimema ukuba ukufikelela kwezinye incwadi eli khonkco eziya kwalathisa kwiphepha lasekunene blog in French kuwe. Uyakwazi ukuguqulela iphepha le web le ncwadi kunye umguquli amakhasi wamazwe yakho intanethi « Crome » okanye ngenye indlela.